Bangladesh vs Zimbabwe match live telecast on Gazi TV. As you know Zimbabwe tour of Bangladesh 2018. Ban vs Zim will play three ODI and two Test match in this tour. Bangladesh vs Zimbabwe 1st ODI match will start on 21 October 2018 at 02:30 PM at Mirpur Stadium in Dhaka. All the match in this tour Bangladesh vs Zimbabwe will live stream on Gazi TV and BTV as well.
Bangladesh vs Zimbabwe 1st ODI live stream on Gazi TV. Bangladesh vs Zimbabwe 2nd ODI match live telecast on Gazi TV on 24 October, Bangladesh vs Zimbabwe 3rd ODI live broadcasting on Gazi TV and BTV also Star Sports network.
Bangladesh vs Zimbabwe 1st Test live telecast on Gazi TV. Ban vs Zim 2nd Test live stream on BTV and Gazi TV day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5.
Bangladesh vs Zimbabwe schedule and live score link
Oct 21, 02:30 PM – Bangladesh vs Zimbabwe 1st ODI
Oct 24, 02:30 PM – Bangladesh vs Zimbabwe 2nd ODI
Oct 26, 02:30 PM – Bangladesh vs Zimbabwe 3rd ODI
Nov 03, Sat – Nov 07, 09:30 AM – Bangladesh vs Zimbabwe 1st Test
Nov 11, Sun – Nov 15, Thu, 09:30 AM – Bangladesh vs Zimbabwe, 2nd Test
Besides Bangladesh vs Zimbabwe match will live streaming online at YouTube, Facebook and Rabithole Apps.